हाँस्य कलाकार थापाको मृत्यु हुनु पुर्व घरमा घटेको थियो अर्को दुखदायी घटना, लगतै भर्ना भएका थिए अस्पताल ! – Kavrepati
Home / समाचार / हाँस्य कलाकार थापाको मृत्यु हुनु पुर्व घरमा घटेको थियो अर्को दुखदायी घटना, लगतै भर्ना भएका थिए अस्पताल !
हाँस्य कलाकार थापाको मृत्यु हुनु पुर्व घरमा घटेको थियो अर्को दुखदायी घटना, लगतै भर्ना भएका थिए अस्पताल !
admin August 22, 2021	समाचार Leaveacomment 150 Views
वरिष्ठ कलाकार शम्भुराज थापाको निधन भएको छ । सङ्क्रमणका कारण तीन साता पहिले उपचारका लागि पाटन अस्पताल भर्ना भएका ५५ वर्षीय थापाको आज बिहान निधन भएको कलाकार सन्देश लामिछानेले जानकारी दिए ।
तीन दशकदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय थापाले थुप्रै टेलिसिरियल र चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए । उनले पछिल्लो समय मेरी बास्सै, भद्रगोल, गोलमाल, हल्का रमाईलोलगायतका टेलिसिरियलमा अभियन गर्दै आएका थिए । उनि हल्का रमाइलो टेलिसिरियलमा ‘बखते’ नामबाट दर्शकमाझ चर्चित भएका थिए ।
नेपाली हास्य टेलिश्रृंखलाका नियमित दर्शकका लागि एक चिरपरिचित अनुहार थिए, शम्भुराज थापा । यद्यपि, उनको वास्तविक नाम भने धेरैलाई थाहा थिएन । हास्य टेलिश्रृंखला ‘हल्का रमाइलो’ मा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण धेरैले उनलाई ‘बखते’ नामले चिन्थे । लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय थापा एक संघर्षशील कलाकार हुन् ।
पछिल्लो समयमा भने उनी हास्य टेलिश्रृंखलाहरुमै केन्द्रित थिए । यद्यपि, उनको पहिचान ‘हास्य कलाकार’ भन्दा पनि चरित्र अभिनेताको थियो । ‘हल्का रमाइलो’ का निर्देशक मरिचमान श्रेष्ठ बल्छीका अनुसार करिब एक महिना अगाडि मात्रै मातृ वियोगमा परेका थिए शम्भु । आमाको काजक्रियामा बसिरहेकै समय उनलाई संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि ५ दिनमै किरिया सकेर उनी अस्पताल भर्ना भए ।
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा निरन्तर उपचारका बाबजुद उनको अवस्था विग्रिँदै गयो । पछिल्लो ९/१० दिनदेखि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । तर, डाक्टरहरुले उनलाई जोगाउन सकेनन् ।
चर्चित हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुसको भनाइमा थापा कसैलाई नचिढाउने स्वभावको घमण्डरहित व्यक्ति थिए । कलाकारका रुपमा उनी आफ्नो कामप्रति समर्पित र मिहिनेति स्वभावको आफूले पाएको धुर्मुसले बताए । मेरी बास्सैका केही भागहरुमा थापाले अभिनय गरेका थिए ।
‘उहाँ सबैसँग घुलमिल हुने र सरल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो,’ धुर्मुसले भने, ‘घमण्ड भन्ने उहाँमा बिल्कुल कहिल्यै देखिनँ ।’ ५५ वर्षिय थापाको स्थायी घर बिराटनगर हो । आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका उनी परिवारसहित काठमाडौंको गुहेश्वरीमा बस्दै आएका थिए । उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरीको विवाह भइसकेको छ भने छोरा पनि हुर्किसकेका छन् ।
यस्तै उनले महानायक राजेश हमाल, गौरी मल्ललगायतको अभिनय रहेको ‘आफ्नो विरानो’ चलचित्रसमेत निर्माण गरेका थिए । स्व थापाका श्रीमती एक छोरा र एक छोरी छन् । स्व थापाको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाहनमा उनको अन्त्यष्टी गरिएको छ । संक्रमण कारण दाहसंस्कारमा थोरै व्यक्तिहरु मात्रै उपस्थित भएका थिए ।
Previous चर्चित हास्यकलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छि धुर्बे’ लाई पुत्रलाभ, बधाई दिनेको ओइरो
Next पशुपतिमा बखतेको अन्तिम बिदाइ: रोकिएन बल्छी देखि म्याकुरीको आँ’सु | श्री’मतीको यस्तो अव’स्था (भिडियो हेर्नुहोस)